Mikarakara elefanta kamboty ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2019 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Yorùbá, Ελληνικά, नेपाली, Français, عربي, Svenska, Español, 日本語, polski, Deutsch, English
Mpkambana iray ao amin'ny toby mamahana an'i Ayeyar Maung amin'ny tavoahangy. / Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy
Ity dia lahatsoratra nosoratan'i Aung Kyaw Htet tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary naverina navoakan'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Mbola vao telo volana i Ayeyar Sein fony izy hitan'ireo mpiasan'ny ala tany anaty kizo lalina tao Irrawaddy Delta. Tratra tao anaty fandrika vy napetrak'ireo mpihaza ny tongony iray. Ireo mpiasa avy amin'ny orinasam-panjakana mpikapa hazo no namonjy azy sy nandefa azy hotsaboina tany amin'ny toby iray fametrahana elafanta ao amin'ny faritr'i Bago. Ankehitriny izy dia iray amin'ireo valo ampiantranoina ao Wingabaw, ilay hany toerana tokana fiahiana ireo elefanta kamboty ao Myanmar.
Zanaka elefanta iray hafa no nizaka ny tahaka izany, Ayeyar Maung. Talohan'ny nahatongavany tao an-toby, tratra tao anaty fandrika tariby ity biby vao enina volana ity. Noho izy tafahitsoka tanelanelan'ireo vato tao anatin'io ala nahitàna an'i Ayeyar Sein io ihany, voatery nandao azy ny iray tarika taminy. Na izany aza, vitan'ireo mpiasan'ny ala ny nanavotra azy ary dia tonga tao an-toby izy tamin'ny taona lasa.
Ry zareo no kamboty zandriny indrindra ao an-toby, mihoatra efa ho efatra taona amin-dry zareo ny an'ireo zokiny indrindra. Samy nanana zava-tsarotra nolalovany daholo izy rehetra. Ny sasany nilaozan'ny namany, raha ny hafa indray kamboty rehefa lavon'ireo mpihaza ny ray aman-dreniny. Ao amin'ny toby Wingabaw, miankina betsaka amin'ny sakafo karakarain'ireo mpikarakara isanandro ho an'ireo tena mbola taiza ireo zanaka elefanta tsy misy reniny. Omena fahafahana hikarenjy any an'ala izy ireo rehefa maraina, ary alohan'ny hiverenany ao an-toby dia misaika anaty riandrano iray tsy lavitra eo.
Amin'izao fotoana izao, heverina ho misy elefanta dia miisa 1.500 eo ho eo ao Myanmar. Saingy tena tandindonin-doza tokoa izy ireny noho ny ataon'ireo mpihaza, mihazakazaka tokoa ny famonoana elefanta, iray isankerinandro.
Fotoana fandroana / Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy
Aorian'ny fotoana fandroana, mihanika hiakatra ny moron'ny riandrano ireo ao akaikin'ny toby Wingabaw ireo zanaka elefanta. / Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy
Mpiasa iray ao an-toby mijery ny hafanan'ny vatan'i Ayeyar Sein. / Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy
Mpiasa iray ao amin'ny Toby Wingabaw ao amin'ny faritr'i Bago manome tavoahangin-dronono an'i Ayeyar Sein, zanaka elefanta kamboty. / Aung Kyaw Htet / The Irrawaddy